Zvirongwa zvekugadzira webhusaiti kuti ubvise zvose zvinoshandiswa kubva kune peji - semalt mazano
Kuchenesa mazano kubva pamapeji ewebhu nguva dzose kwakaoma. Iwe unofanirwa kutevedzera maidiki aidiwa imwe neimwe, uye yakanyanyisa uye yakashata. Zvisinei, kune mamwe web-based programs kuti abvise mazano ose kubva mawebhusayithi aunoda uye mabloggi pasina chero dambudziko. Chinhu chakanaka ndechekuti mapurogiramu aya anogona kubatanidzwa neIE, Firefox, Chrome, uye Safari - como comprar oculos de sol pela internet.
IWebTool Link Extractor iyi inozivikanwa ne-web-based software uye kuwedzera kweFirefox. Ichakubatsira kutora data yako zvakananga pamushini wako. Imwe yakasungirirwa uye yakagadziriswa, purogiramu ino ichaita kuti kurapwa kunyore nyore uye kunofadza. Kubvisa deta kubva kune zvinyorwa zvemashoko, mahofisi ekufambisa uye nzvimbo dzekutengesa mabhizimisi hazvina kumbova nyore. Neyi software, unokwanisa kuita mabasa akawanda pasina chero dambudziko. Iyo inobvumira zvikumbiro zvishanu chete paawa uye chimbo chinozivikanwa kuti chishande zvakajeka. Zvimwe zvezvinyorwa zvaro zvakakosha ndezvokutora uye zvinyorwa zvinyorwa zvekunyore uye Google Page-Rank sarudzo.
Haisi kungowedzera Firefox chete asiwo inoyevedza ye-web-based program. Inotora zvinyorwa uye inotsvaga data yako kubva kune nhau dzemashoko, RSS feeds, blogs uye mapeji ehupfumi ehupfumi pasina chero dambudziko. Inopa masarudzo kufuta deta kubva pane zvayo uye zvaunoda. FireLink Report inoshanda kuburikidza kuongorora zvibatanidza nekuvandudza dhasiketi.
SEM Link Extractor inozivikanwawo nokuda kwekubatanidzwa kwekubatanidza uye webhupu yekutsvaira. Icho chimwe chezvinyorwa zviri nyore uye zvakanakisisa zvekubvisa zvese zvinoshandiswa kubva pawebhu peji. Dhidhibhodhi yaro yakaona inoita kuti kuita kwako kuwedzerwa kuve nyore uye kuri nyore. Kunyangwe iwe uchida kutsvaga data kubva pakushamwaridzana nyore kana kuita zvinyorwa zvakaoma zvekuita mapurojekiti, purogiramu iyi ichaita zvinhu zvose kwauri pasina dambudziko.
SEOquake Link Extractor ndeimwe yekushandiswa kwewebhu. Izvo hazvidi kukuraira, uye iwe unogona kuwana rubatsiro kubva paIndaneti. Inobatsira kuti ubvise mazano ose kubva pane imwe peji yepawebhu uye unofamba uye unotora data chaiyo-nguva. Izvi zvicharatidza hupfumi hwekubatana mumhando yeGoogle mapeji ewebhu uye mapeji evemarkmark.